Ambohimanjaka – Jiolahy 15 nirongo basy nanafika trano iray - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Ambohimanjaka – Jiolahy 15 nirongo basy nanafika trano iray
Trano iray no noro- bain’ny jiolahy 15 misa-ron-tava, sady nitondra basy lava telo sy poleta iray omaly vao maraim-be tokony ho tamin’ny 1 ora maraina tetsy Ambohi-janaka. « Niditra an-keriny tao amin’ilay trano ireo jiolahy ka nanambana basy ireo olona tao an-trano, sady nitaky ny vola rehetra », hoy ny tatitra azo teo anivon’ny zandarimaria.
« Nilaza anefa ireo olona tao an-trano fa tsy misy vola, ka ny peratra teny an-tanan’ilay tompon-trano no nalain’ ireo olon-dratsy. Rehefa nisava an’ireo entana tao an-trano anefa izy ireo dia mbola nahita vola sivy alina, ka nalain’izy ireo ihany koa », hoy hatrany ny tatitra.
Niantso ny zandary avy eo ireo tompon-trano, ka vetivety ihany dia tonga teny an-toerana izy ireo, saingy efa tsy nahatratra ireo mpandroba intsony. Tsy nisy ny naratra tamin’ity fanafihana ity, hoy ny zandary avy ao Andoharanofotsy izay mandray an-tanana ity raharaha ity sy ny fikaro- hana ireo olon-dratsy.
FANAFIHAN- JIOLAHY-Nifoha hiaro ny tsenany ilay rangahy no maty notifirin’ny jiolahy(0)
Omaly tokony ho tamin’ ny iray ora maraina no nitrangana fanafihana mitam-basy teny Andakana, distrikan’Ambohidratrimo. Nandritra ny fanapitsohan’ ireo andian-jiolahy ny varavarana no taitra tamin’ny torimasony ny raim-pianakaviana, tompona tranombarotra, ka nikasa ny hivoaka. Tamin’io fotoana io indrindra no nitifiran’ireo mpanafika azy ary dia maty teo no ho eo ity lehilahy 65 taona ity. Rehefa nandre ny poa-basy ny fokonolona dia nirohotra avy hatrany teny an-toerana hamonjy ilay fianakaviana, kinanjo dia mbola norarafan’ireo jiolahy tamin’ny tifitra avy ao an-trano indray koa. Samy namonjy ny ainy avokoa ny rehetra, vokatr’izany. Lehilahy 38 taona iray avy amin’ireo fokonolona no voatifitra nandritra ny fifandonana. Finday miisa telo miampy firavaka volamena no lasan’ireo jiolahy. Efa nandositra ireo olon-dratsy vao tonga teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana. Nandritra ny fanadihadiana dia fantatra fa basy « kalachnikov » no nentin’ireo nanao an’ity fanafihana ity. N A
***Fanolorana fitaovana > Fitaovana maro no natolotry ny Zandarimaria frantsay ho an’ny Zandarimaria malagasy omaly tamin’ny 11 ora antoandro. Hahazo anjara amin’izany ny Zandarimaria any Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga ary Toliara. Notokanana nandritra io fotoana io ihany koa ny efitrano fianarana iray vaovao nampitondraina ny anaran’ilay mpanelanelana teo amin’ny Zandarimaria malagasy sy frantsay Daniel Strub izay namoy ny ainy ny volana novambra lasa teo. ***Gadra afaka nanafika > Notafihin’ny »djama » na ireo gadra afaka manaiky ampiasain’ ny vahoaka hiaro ny fana-nany, rehefa avy nanefa ny saziny tany am-ponja, ny tanànan’i Begisa, fokon-tanin’i Beseva, faritr’i Boeny ny 8 desambra teo. Telo lahy nirongo antsy goro sy kibay ireo nanafika ireo. Voalaza fa tsy nahazo ny karama nampanantenaina izy ireo ka izay no antony nivadihany. Nandritra ny fifandonana tamin’ireo mpitandro ny filaminana dia lavo ny iray tamin’ireo mpanafika. Ny roa kosa afa-nandositra. *** Trano 123 tafo niara-may > Tsy fitandremana nataona vehivavy iray nivarotra solika an-tsokosoko no nitarika hain-trano tao Betsiaka, faritr’i Diana, ny 7 desambra lasa teo tamin’ny 10 ora maraina. Trano miisa 123 no indray may. Mitentina hatrany amin’ny Ar 24 000 000 ny tetibidin’ireo entana simba, ary olona 63 no tra-boina ankehitriny. Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay vehivavy ka dia voatery nentin’ireo zandary any Antsiranana ho fiarovana ny ainy.
HAIN-TRANO-Tsena fito may kilan’ny afo teny amin’ny 67 Ha(0)
Ny alin’ny alahady teo, tokony ho tamin’ny 1 ora maraina no nitrangana hain-trano teny amin’ny 67ha. Tsena hazo miisa fito, mpivarotra hani-masaka manamorona ny fiantsonan’ ny taksibe eny an-toerana, no may kilan’ny afo. « Ilay tsena teo afovoany no niandohan’ny afo. Mahandro sakafo mandritra ny alina izy ireo. Sendra nangotraka ilay sakafo ary dia niraraka teo amin’ilay arina ireo menaka ary nitarika ny firehetana », hoy ny mpiasa iray tao amin’ireo tsena may. Tsy tazana teny an-toerana ireo tompon-trano tamin’ny fotoana nitrangan’ ny loza. « Mitentina hatrany amin’ny Ar 40 000 000 ireo entana simba tao amin’ny tsenako. Nahazo ny efitra fasiana ireo fitaovana sarobidy ny afo ka izay no mampidangana azy toy izao », hoy i Josiane Masy, tompon’ny tsena iray. Tsy nisy noraisina Ora iray taorian’ny niantombohan’ny afo no tonga ireo mpamonjy voina. « Nandritra ny ora iray sy sasany teo no namonoan’ izy ireo ny afo. Tsy nisy entana avotra intsony anefa tamin’ireo tsena fito », hoy hatrany ilay mpiasa. Tsy misy antoka avokoa ireto trano ireto, araka ny fanazavan’ ireo mpivarotra. Voalaza fa efa nanao fangatahana izy ireo, saingy tsy nahazo valiny mahafa-po noho ireo tsena vita amin’ny hazo. « Tsy maintsy hametraka fitara-inana eny anivon’ny zandary izahay. Tsena miisa dimy izao no nivondrona hana-tanteraka izany », hoy hatrany i Josiane Masy. Naka Andrianjanaka
FANAFARANA SY FAMPIDIRANA ENTANA-Hisy hetra vaovao halaina amin’ireo mpandraharaha tsy manana «Nif»(0)
Hiampy ny vola haloan’ireo mpanafatra entana any ivelany. Araka ny lalàna momba ny fitantanam-bola taona 2014 dia misy hetra vaovao halaina amin’ireo entana. « Natao ho an’ireo olona manao fandraharahana kanefa tsy manana laharam-pamantarana izy io. Raha ny eo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ohatra, no resahina dia 5%-n’ny sandan’ny entana no alaina amin’ izany », hoy Rasoloelison Lantoniaina, minisitry ny Fitan-tanam-bola sy ny Tetibola, taorian’ny fanokafana ny fivoriana narahina adihevitra hanitarana ny ambaindain’ny hetra, tetsy amin’ny Cci Ivato, omaly maraina. Etsy ankilan’izay ihany koa anefa dia misy ny hetra sy haba hofoanana manomboka ny taona 2014. « Ao ny fiantraikan’ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny Vondrona eoropeanina ka tsy hitakiana hetra na haba amin’ ny entana avy any amin’izy ireo ka miditra eto amintsika, ary tsy hitakian’izy ireo hetra sy haba amin’ny entantsika miditra any amin’izy ireo ihany koa », hoy izy. Manodidina ny Ar 40 000 tapitrisa ny hetra sy haba ho foana amin’izany. Misy hetra hoesorina ihany koa eo amin’ny tonto-lon’ny fiantohana ho an’izay mbola mamerina izany fiantohana izany. Mitentina Ar 6 000 tapitrisa eo izany. Hisy ny fidinan’ny hetra sy haba hiditra amin’ny Fanja- kana manoloana ireo fepetra noraisina ireo. Hiankina amin’ ny hetra hiditra manoloana ny fanarenana ny toekarena sy ny fanampiana avy any ivelany ny Fanjakana hamenoana ny fatiantoka. HNA
FANADIOVANA NY TANANA-Nahazo Ar 60 tapitrisa ny kaominina Antananarivo renivohitra(0)
Vita sonia omaly tetsy amin’ny Lapan’ny tanànan’Antananarivo ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) sy ny faritra Analamanga. « Tolo-tanana amin’ny ezaka hatao amin’ny fandraofana fako eto an-drenivohitra no nanoloran’ny faritra Analamanga Ar 60 tapitrisa ho an’ny Cua », hoy Randriambololona Mananjara, Lehiben’ny faritra Analamanga. « Hampitomboina ireo fiara be mitatitra ny fako eto an-drenivohitra. Etsy andaniny, hampiana ihany koa ny olona miasa eny amin’ny dabam-pako. Hiandraikitra indrindra ny fanaraha-maso ny tsy fiparitahan’ny fako ireto farany. Horarahana vato ihany koa ny lalana miditra any Andralanitra, izay mamotapotaka tokoa amin’izao fotoam-pahavaratra izao, ka manjary manasarotra ny fidiran’ireo fiarabe mpitatitra fako eny an-toerana», hoy kosa Rasamimanana Olga, mpisolo toerana ny filohan’ny delegasionin’ny fitantanana ny Cua. Ankoatra ny faritra Analamanga, dia misy ihany koa ireo « prestataire », manolotra fiara be hitaomana fako amin’izao fotoana. « Mampiasa fiarabe “Tractopelle“ sy “Trax“ izahay mba hanafainganana ny fandraofana fako », hoy Rasamoelimihamina Niry, tale jeneralin’ny Sampan-draharaha mahaleo tena misahana ny fikojakojana ny tanànan’Antananarivo. Efa mandeha tsikelikely ny fandraofana fako. « Efa telo andro no nanomboka ny fandraofana fako eto an-drenivohitra. Tokony efa ho hita taratra ny fandroson’ny asa amin’ity herinandro ity », hoy hatrany Rasamimanana Olga. M R
Jiolahy, Mpanoratra Rijakely, 17.12.2012, 08:56	FIARAHAMONINA